Canada neSweden kazhinji LGBT-inoshamwaridzika mafambiro ekushanya
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » LGBTQ » Canada neSweden kazhinji LGBT-inoshamwaridzika mafambiro ekushanya
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kanada Breaking News • tsika nemagariro • Germany Kuputsa Nhau • Hospitality Industry • Kodzero Dzevanhu • LGBTQ • Nhau Dzakanaka • nhau • Vanodanana Michato Honeymoons • Sweden Kupwanya Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now
Kuunzwa kwazvino kwekuenzana kwemuchato kwakavandudza chinzvimbo cheGerman muSPARTACUS Gay Travel Index, ichiisa chinzvimbo cheGNBT chinoshamisira. Germany ikozvino inogovera nzvimbo yechitatu nedzimwe nyika gumi neimwe. Canada neSweden vanozviwana ivo vari pamusoro pechinyorwa. Iyo SPARTACUS Gay Travel Index inovandudzwa gore rega rega uye inozivisa vafambi mamiriro ezvinhu evanhurume, ngochani, bisexuals uye transgender (LGBT) mu197 Countries uye Matunhu.
Kwenguva yekutanga gore rino, iyo SPARTACUS Gay Travel Index inofungawo nezve mamiriro epamutemo eva transgender vanhu. Canada inowana mamaki akazara mune iyi nzira uye nekudaro inokwanisa kuchengetedza yakabatana nzvimbo yepamusoro muiyo Index kekutanga, pamwe neSweden. Nyika dzepamusoro gumi dzakasununguka dzeLBBT dzinoenderera mberi dzine nyika zhinji dzeEuropean Union idzo dzakatomisa mutemo wekuenzana pakuroora, seNetherlands, France, Spain neBelgium. Iyo SPARTACUS Gay Travel Index inoona zvakare kuvandudzwa muIsrael, Colombia, Cuba neBotswana. Kune rimwe divi, nekuda kwekuuraya kwakawanda kwevanhu vanoita ngochani, ngochani uye vanoita zvepabonde mu2017, Brazil yakaverengerwa pasi zvakanyanya zvichienzaniswa nemakore apfuura. IU.SA zvakare iri kudivi rinorasikirwa, ikozvino iri kuiswa pachinzvimbo che39 pane nzvimbo yavo yapfuura makumi matatu nematanhatu. Izvi zvinonyanya kukonzerwa nekuyedzwa nehutongi hwaTrump kudzikisira kodzero dzevashanduri mumauto pamwe nekudzima mutemo unorwisa rusarura uyo wainge waunzwa pasi pehurumende yapfuura.
Pakazara, Somalia, Saudi Arabia, Iran, Yemen, United Arab Emirates, Qatar neMalawi zvakawana zvikanganiso zvakanyanya, neRussia Federal Republic Chechnya ichiuya yakafa yekupedzisira muindekisi, nekuda kwekutambudzwa kwakarongwa nehurumende uye kuuraya ngochani mu2017. kutora nzvimbo ipapo.
Iyo SPARTACUS Gay Travel Index yakaunganidzwa ichishandisa nzira gumi nemana muzvikamu zvitatu. Chikamu chekutanga kodzero dzevanhu. Pakati pezvimwe zvinhu inoongorora kuti ngochani uye ngochani vanobvumidzwa kuroora here, kana paine mitemo yekurwisa rusaruro iripo, kana zera rakafanana rekubvumirwa rinoshanda kune vese vanoita zvepabonde uye ngochani. Chero kusarura kunonyorwa muchikamu chechipiri. Izvi zvinosanganisira, semuenzaniso, zvirambidzo zvekufamba zvevanhu vane hutachiwana uye kurambidzwa kwekuratidzira kwekuzvikudza kana kumwe kuratidzira. Muchikamu chechitatu, kutyisidzirwa kuvanhu nekutambudzwa, kutongerwa mutirongo kana chirango chekutongwa zvinoongororwa. Masosi akaongororwa anosanganisira sangano rekodzero dzevanhu "Human Rights Watch", iyo UN "Mahara & Akaenzana" mushandirapamwe, uye ruzivo rwegore rose nezve kutyorwa kwekodzero dzevanhu kunopesana nenhengo dzenharaunda yeLBBT.